ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုလုယူထားသည့် စစ်အုပ်စု - Yangon Nation News
By : ကိုသိန်းဌေး (ပဲခူး)
နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုလုယူထားသည့် စစ်အုပ်စု –
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ အားကြိုက်၍ ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ၊
စစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ(၄၁၇) ကို ဥပဒေလုပ်ထုံးနှင့်မညီပါဘဲ အတင်းကာရော သတ်မှတ်ကြေညာပြီး၊
ပုဒ်မ(၄၁၈)(က) ကိုလည်း လက်နက်ကိုင် မိုက်ကြေးခွဲ ရယူလိုက်သည်ံအပြင်၊
ထိုပုဒ်မ(၄၁၉) ၏လုပ်ပိုင်နိုင်မူထက် ပိုသည့်အခင်းအကျင်းများကိုလည်း ပြုမူ လုပ်ကိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်၊
ဥပမာ – ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွံ့စည်းတာဝန်ပေးခြင်း၊
စသည်တို့သည် နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူထားသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ လုပ်ပိုက်ခွင့်မဟုတ်ပေ၊
ရွေးချယ်ခံသမ္မတမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ရရှိပြီးမှ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး ခန့်အပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်၊
ထိုပြဌာန်းချက်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ သက်ဆိုင်ရာအခန်းတွင်ပြဌာန်းထားပါတယ်၊
ပုဒ်မ(၄၂၉) အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီသည် ပုဒ်မ(၄၂၆) အရ အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ခြောက်လအတွင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးရမည်၊
ပုဒ်မ(၄၃၁) အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို ကျင့်သုံးရာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအမည်ဖြင့်ဖော်ပြဆောင်ရွက်ရမည်၊
အထက်ပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖွင့်ဆိုချက်ပုဒ်မများသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊လုပ်ထုံးများနှင့်အညီ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့်
နိုင်ငံတော်သမ္မကသာလျှင် တိုင်းပြည်တွင်တကယ်လိုအပ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ပုဒ်မ(၄၁၇) အရကြေညာပြီးမှ အထက်ပါအရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်ဥပဒေများကို
ယခုဖြစ်စဉ်က အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဌာန်းချက် ဥပဒေများတွင်ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားမူမရှိသော ယာယီသမ္မတဆိုသည့်ရာထူးကို ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မညီသည့် လုပ်ရပ်များဖြင့်ဖန်တီးရယူကာ မရှိသော အရေးပေါ်အခြေအနေကိုလုပ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်၊
၎င်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင်ဲအညီလုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိပါသည်ဟု ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာသို့ကြွေးကြော်နေပါတယ်၊
ယခုမိမိတို့တောင်းဆိုနေကြသည်မှာ တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ဆဲဥပဒေ၊နည်းဥပဒေနှင့်အညီ
ပြည်သူက ဒီမိုကရေစီနည်းကျအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ထောက်ခံဆန္ဒမဲပေး၍ အနိုင်ရရှိထားသော လွတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို မပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုအသုံးပြုကာ ပြုမူနေခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန်၊
ရွေးချယ်ခံ အစိုးရကို တရားမဲ့ဖျက်သိမ်းပြီး၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တရားဝင်ဖြစ်သည့် အစိုးရခေါင်းဆောင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊
အပါအဝင် လက်နက်အားကိုးပြီး မတရားဖမ်းဆီးထားသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုလွှတ်ပေးရန်၊
နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ပြည်သူပြည်သားများက မဲပေးရွေးချယ်ထားသော အစိုးရထံပြန်အပ်ရန်၊
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြီးဖြစ်သော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ပြည်သူများကရွေးချယ်တာဝန်ပေးလိုက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ သက်ဆိုင်ရာလွတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများကိုကျင်းပနိုင်ရန်၊
စသည်များကို ပြည်သူအများက တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
ထိုသို့တောင်းဆိုမူများသည် တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ တည်ဆဲဥပဒေများပါပြဌာန်းချက်များကိုသာ တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်၊
ဤသည်ကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနှင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက အသိအမှတ်ပြုအားပေးထောက်ခံနေကြသည်မှာ လှုပ်ခတ် ပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေပါတယ်၊
စစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုက သူတို့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီသွားနေပါသည်ဟု ဆိုနေပါတယ်၊
သို့ကြောင့် မိမိတို့ပြည်သူများကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်လွှတ်တော်အားလုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေရန် ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းကို အသိပေး၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်၊
ပထမအဆင့်အောင်ပြီးမှသာ ဒုတိယအဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ပြင်ဆင်၊ပယ်ဖျက်၊
ယခုအခါမှာ ပထမအဆင့်ကို ဝေဝါး တုန့်ဆိုင်းနိုင်လောက်သည့် issue များတက်လာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်၊
စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စု၏ ထွက်ပေါက်နှင့် ဥပဒေမဲ့အချိန်ဆွဲနိုင်မူသည် ဖွဲ့စည်းပုံဖျက်သိမ်ရေးတစ်ခုသာ ကျန်နိုင်တော့ပါတယ်၊
ပြည်သူတောင်းဆိုလို့ဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုလာရင် အခုဖွဲ့စည်းပုံဖျက်သိမ်းရေးလို့အော်နေကြတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲအစည်းများက ဘာများလုပ်ကြမှာလဲ ?
ကဲ – ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ပြန်ဆွဲမယ်၊ ကိုယ်စားပြုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊အစုအဖွဲ့တွေလုပ်ကြပါဆိုလာရင် အချင်းချင်း တိုက်ကြ ခိုက်ကြ နေရာလုကြနဲ့အချိန်တွေဘယ်လောက်ကုန်ကြအုံးမှာလဲ ?
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲရင်လည်း လက်ရှိနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာ အာဏာကို လုယူထားတဲ့စစ်အုပ်စုကဘဲ ဦးဆောင်မှာသာဖြစ်ပါတယ်၊
ရေးဆွဲငြင်းခုန်နေကြရင်းနဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးက ဆယ်စုနှစ်တော့ဖြစ်သွားနိုင်လောက်တယ်၊
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ ပထမ issue ဖြစ်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊
ယခုအခါမှာ မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မူတွေဟာ အားကောင်းလာနေတဲ့အပြင် UN အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကလည်း အာရုံစိုက်လာကြတာကိုတွေ့နေရပါပြီ၊
(၂) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မလိုက်နာပါက ဖျက်သိမ်းသင့်ရင်ဖျက်သိမ်းပစ်မယ်၊
ယခုအခါ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အစိုးရကို အာဏာပြန်ပေးရမည်ဟု ၊
မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ gen -z လူငယ်များနဲ့အတူ
gen – x. y မျိုးဆက်များနှင့် အရပ်ရပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်မှာ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်လာကာ ထိရောက်မူများလည်းရှိလာနေပါပြီ၊
UN၊ အာဆီယံ၊G 7၊ ဥရောပ EU ၊အမေရိကန်နှင့်မဟာမိတ်နိုင်ငံများ၏ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်း၊ထုတ်ပြန်ကြေညာမူတိုင်းသည်လည်း သက်ရောက်မူ အားကောင်း ထိရောက်လို့လာနေပါပြီ၊
ဤကဲ့သို့သော အခင်းအကျင်း အခြေအနေမှာ ဖွဲ့စည်းပုံဖျက်သိမ်းရေးဆိုတဲ့ issue ကအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ထွက်လာသောအသံသည် တပ်အုပ်စုဘက်က အော်စေချင်တဲ့ အသံလို့တော့ မစွတ်စွဲလိုပါဘူး၊
သို့သော် သတိထား သုံးသပ်ကြဖို့တော့လိုအပ်နေပါပြီ၊
လက်ရှိအခြေအနေအရ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသည် စစ်အုပ်စုထံတွင် ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို အချိန်မတန်ပါဘဲ ဖျက်သိမ်းမူရှိလာပါက စစ်အုပ်စုကသာ အသာစီးရနေမြဲ ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်၊
စစ်အုပ်စုအား သူတို့ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဝတ်ကျင်းထဲမှာသာ ရှိနေစေဘို့လိုပါတယ်၊
သူတို့ဝပ်ကျင်းကို သူတို့ရဲ့ဝပ်ကျင်းနဲ့ပဲပြန်ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့က လက်ရှိ အခင်းအကျင်းအခြေအနေများကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် ပယ်ဖျက် ဖြည့်စွတ်မူများအတွက်
ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အစိုးရလက်ထဲကို တိုင်းပြည်၏
အချုပ်အခြာအာဏာ အပြည့်ပြန်လည် ရရှိ စေလာပြီး၊
ရွေးချယ်ခံ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်များ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်၊
သို့မှသာလျှင် မိမိတို့ ပြည်သူ ပြည်သားများမှ တိုင်းပြည်အတွက် မှန်ကန်သည့် အသာစီး
နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကို လက်နက်အားကိုးပြီးမတရားလုယူထားကြသူတွေဟာ ပုဒ်မ(၁၂၂/၁၂၄)၊ ပုဒ်မ(၅၀၅)(က/ခ/ဂ) များကိုလည်ဲးထည်လဲသုံးဘို့ကို ဝန်လေးနေမယ့် လူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး၊
မိမိတို့ပြည်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သူအပေါင်းသည်၊ ၎င်းအတန်းအစားထဲသို့မရောက်ရှိကြပါစေနဲ့ဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်၊
ယခုအခြေအနေမှာက အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီဆိုပြီးအဖွဲ့ပေါင်း(၂၅) ဖွဲ့ကဖွဲစည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူ့ဆီပြန်ရောက်ရမည် ဟူသည့် issue ကမှေးမှိန်သွားသလိုခံစားကြရပါတယ်၊
အားလုံးမှ စဉ်းစား သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေ၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊
ရွေးချယ်ခံသမ္မကြီးဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊
မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူနိုင်ငံသားများ ပြန်လွှတ်ပေးရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊
ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူ့စီ ပြန်ရောက်ရှိရေး
ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊
အလေးထားစွာဖြင့် . ကိုသိန်းဌေး ပဲခူး၊